Kenya Oo Hoggaaminaysa Hawlgalada Ilaalinta Xeebaha Soomaaliya ! | Sanaagmedia — Warar Sugan
Kenya ayaa hoggaamin doonta howlgallada ka dhanka ah burcad badeeda xeebaha dalka Soomaaliya muddo labo sanno ah laga bilaabo bisha Janaayo ee sannadka soo socda.
Dalalka xubinta ah ka ah ururka la dagaallanka burcad badeeda xeebaha Soomaaliya ayaa waxay u doorteen Kenya inay hoggaamiso ilaalinta xeebaha si ay dusha ugala socoto dhaqdhaqaaqyada amniga .
Go’aanka lagu soo doortay Kenya waxaa uu ka dambeeyay markii dalalka xubinta ka ah ururka la dagaallanka burcad badeeda ay shir ku qabteen magaalada Balaclava ee dalka Mauritius.
Ammaanka badaha iyo ilaalinta xeebaha waxaa ay kamid yihiin ajanddooyinka xoojinta amniga qaranka iyo dhaqaalaha.
Xeebaha Soomaaliya waxaa ku sugan maraakiibta dalalka shisheeyee oo ilaalinayo halkaas
Waxay sidoo kale ay sheegtay in Kenya ay dalalka gobolka la wadaagi doonto macluumaadka ku saabsan howlgallada iyo amniga xeebaha.
“Si loo helo barnaamijyo wax ku ool ah oo lagu ciribtirayo burcad badeeda, hoggaanka Kenya waxaa uu ka shaqeyn doonaa sidii uu sare ugu qaadi lahaa dadaalka uu sameeyay Mauritius iyo dalalkii ka horreeyay si loo ilaaliyo raadadka dhaxalgalka ah ee muujinayo horumarada lagu tallaabsaday” ayay tiri wasiirka gaashaandhigga Kenya.
Dacwad ku saabsan murankan ayaa hor taalla maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda(ICJ), taasoo laga dhuur sugayo iney dhageysato, ka dibna go’aan kasoo saarto.